Tababare Ole Gunnar Solskjær oo iska diiday saxiixa xiddig ka tirsan Tottenham Hotspur – Gool FM
(Manchester) 31 Maajo 2019. Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa iska diiday inuu sameeyo saxiixa xiddig ka tirsan Tottenham Hotspur.
Sida laga soo xigtay wargeyska “The Sun” ee dalka England tababare Ole Gunnar Solskjær ayaan dooneynin in Red Devils ay u dhaqaaqdo soo xero galinta laacibka reer Belgian ee Toby Alderweireld.
Tababare Solskjær ayaa doonaya inuu sii ilaashado daafacyada uu haatan ku heysto kooxda Manchester United, wuxuuna isku dayi doonaa inuu ka shaqeeyo sidii uu sare ugu qaadi lahaa awoodooda ciyaareed xilli ciyaareedka soo socda.
Maamulka kooxda Manchester United ayaa dhankooda iska diiday inay xiriir la sameeyaan daafaca reer Belgian ee Toby Alderweireld, gaar ahaan maadaama heshiiskiisa uu ku kacayo qiimo dhan 25 milyan oo ginni ee ah qiimaha lagu burburin karo heshiiska uu ku joogo Tottenham Hotspur.
Si kastaba ha ahaatee, Manchester United ayaa raadineysa daafac aad u fiican ee ku haboon kooxdeeda si ay ugu xoojisato qeybta dambe ee difaaceeda, gaar ahaan maadaama ay Red Devils ku fashilantay inay ilaashato shabaqeeda oo nadiif ah 15-kii kulan ugu dambeeyay xili ciyaareedka haatan dhamaaday ee 2018-2019.
Aguero oo ka yaabsaday Man City, kaddib markii uu shegay xiliga uu rajeenayo inuu ka tago Etihad Stadium